Slain Myanmar lawyer’s family considers himafallen hero ဦးကိုနီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှု အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နှုတ်ဆိတ်နေ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeSlain Myanmar lawyer’s family considers himafallen hero ဦးကိုနီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှု အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နှုတ်ဆိတ်နေ
Slain Myanmar lawyer’s family considers himafallen hero ဦးကိုနီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှု အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နှုတ်ဆိတ်နေ
Ae Banyar Saw
“အဖေ့ရဲ့ ဈာပနမှာ လူတွေက အရမ်းများလွန်းအားကြီးတော့ အဲ့ဒီကို ဒေါ်ေ အာင်ဆန်းစုကြည်ဆီက ပန်းတွေပို့ခဲ့သလား မပို့သလား ဆိုတာတော့ ကျွန်မ လည်း သတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၀မ်းနည်းပူဆွေကြောင်းပြောကြားဖို့ ကျွန်မ တို့ဆီကို ဖုံးနဲ့ ဆက်သွယ်ခဲ့တာတော့ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ပါဘူး ” ဟု ဦးကိုနီ ၏သမီးကြီး ယဉ်နွယ်ခိုင် က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်အား ဂုဏ်ေ ပးရည် ညွှန်းကာ ပြောကြားသည်။
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှု အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နှုတ်ဆိတ်နေ မှုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ၎င်းအနေနှင့် မည်သို့ခံစားရကြောင်း ပြောရန် ဖိပြီးမေးမြန်းေ သာအခါ သူက …
“ကျွန်မအတွက်အကြီးမားဆုံးသော အရာဟာ ကျွန်မရဲ့ ဖခင်ပါပဲ။ ခုတော့ ကျွန်မ အတွက် အကြီးမားဆုံးသော အရာ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မအဖေကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီ။ ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဆီက ဘာတစ်ခုမှကို မျှ ကျွန်မမမျှော်လင့်ထားပါဘူး။ ကျွန်မ အဖေ သေဆုံးသွားတာကြောင့် သူတို့အဖို့ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ဆုံးရှုံးသွားရတယ် ဆိုတာ ကို နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသားတွေကပဲ ဆုံးဖြတ်ကြပါလိမ့်မယ်။
“ကျွန်မဖခင် သေဆုံးခဲ့ရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အာဏာပိုင်တွေက အမှုကိစ္စကို ကိုင် တွယ်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မတို့ ကျေနပ်မှုရှိသလား မရှိဘူးလားဆိုတာ ကတော့ ပြောဖို့က သိပ်ကိုစောလွန်းပါသေးတယ်။ ဖြစ်တာရက်ပိုင်း ပဲ ရှိသေး တာ ဆိုတော့လေ၊ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်နိုင်သလား မဖော်ထုတ်နိုင် ဘူးလား ဆိုတာကတော့ အစိုးရရဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပုံ နဲ့ အချိန်က သက်သေပြလိမ့် မယ်လို့ ကျွန်မ ထင်တယ်။
” ကျွန်မဖခင် သေဆုံးခဲ့ရပြီ။ သူ အသတ် ခံလိုက်ရပြီ။ သူဟာ ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်း တစ်ဦးပဲ။ သူသေဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနည်းဆုံး အနေနဲ့ အဖြစ်မှန်က ဘာလဲဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာဖို့တော့ ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် သူ့ကို သတ်လိုက်ကြသလဲ ဆိုတဲ့ အမှန်တရား ပေါ်ပေါက်လာဖို့၊ ဒီတစ်ခုကိုတော့ ကျွန်မတို့ ရထိုက်ပါတယ် ”
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ထုတ် ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှ ၀ါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် ပူလစ်ဇာဆုရ မြန်မာအမျိူးသမီး သတင်းထောက် အက်စ်သာထုဆန် ရေးသားသည့် ” လုပ်ကြံခံရသည့် မြန်မာေ ရှ့နေ အား ယင်း၏ မိသားစုက ကျဆုံးသူရဲကောင်းဟု သတ်မှတ်” အမည် ရှိ ဆောင်းပါးမှ ရှေ့နေကြီး ဦးကိုနီ ၏ သမီးကြီး ပြောကြားခဲ့သည့် ကောက်နု တ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။)
In this image taken from video, Yin Nwe Khine, daughter of assassinated Myanmar legal adviser Ko Ni, speaks during an interview with the Associated Press in Yangon, Tuesday, Jan. 31, 2017. The daughter of an assassinated Myanmar legal adviser says his family worried about his political activities and warned him to be careful, but he pursued his work for the sake of Myanmar’s people, regardless of who they were. (Associated Press)
By Esther Htusan | AP January 31 at 9:51 AM
YANGON, Myanmar — The family of an assassinated adviser to Myanmar’s government had worried about his activities and warned him to be careful, but he pursued his work for the sake of the country’s people, regardless of who they were or what religion they believed, his daughter said Tuesday.
His family feels no regret for his high-profile political work and considers himafallen hero, his daughter, medical doctor Yin Nwe Khine, told The Associated Press in an exclusive interview. “We were always worried about him and the danger he might face because of politics,” she said.
“But he was always very enthusiastic about politics. He wanted to do good for the sake of the people,” she declared in the family’s colonial-era apartment onacrowded downtown Yangon street. “He didn’t work for any particular people or religion.”
Ko Ni specialized in constitutional law, criticizing army interference in politics and advising Suu Kyi’s party how to try to get around statutes in the army-imposed constitution that gave the military undue power in the government democratically elected in 2015. He was also an advocate for the Muslim minority in the overwhelmingly Buddhist country,aposition that earned him the enmity of ultra-nationalist Buddhist monks and their allies.
Suu Kyi as of Tuesday afternoon has not spoken publicly about the killing, and did not attend Ko Ni’s funeral on Monday, instead carrying out her duties in the capital Naypyitaw. Her silence has disturbed some of Ko Ni’s admirers.
“I didn’t notice if Daw Aung San Suu Kyi sent flowers for the funeral or not as it wasabig crowd. But she never called or contacted us in person to give her condolences,” said Yin Nwe Khine, using an honorific for older women.
Pressed on how she felt about Suu Kyi’s silence, she responded: “My father is the biggest thing for me. I’ve lost that big thing, ‘my father’ and I don’t expect anything from anyone. The country and its people will judge what kind of loss my father’s death was for them.”
← စင်ပြိုင်အာဆီယံ-မြန်မာ ပူးပေါင်းဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ချုပ် “ဦးကိုနီလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှု” BURMA: Investigate murder of lawyer Ko Ni, take measures to protect human rights defenders
၂၅ ရက်နေ့က နေဇင်လတ် ရေးခဲ့တဲ့စာပါ – လုပ်ကြံမှုဟာ အစောကြီးကထဲက ကြို တင်စီမံ ထားကြပုံရတယ် →